Ungakwandisa kanjani isikhundla sakho futhi ukwandise izintengo zakho usebenzisa i-Amazon Rank Tracker?
I-keyword ye-i-Amazon tracker iyisofthiwe ewusizo e-inthanethi eyenzelwe ukusiza abakwa-webmasters ukuncintisana kule platform yokuhweba. Inikeza ithuba lokukhuthaza imikhiqizo ye-Amazon kubathengi abangenakubalwa nsuku zonke nokwandisa ivolumu yokuthengisa.
Kufanele usebenzise leli thuluzi njalo ukuze uthuthukise ukutholakala komkhiqizo ku-Amazon. Kufanele ulandele ngokuqhubekayo amagama akho angukhiye ahlosiwe ukuze ugcine futhi uqinise izikhundla zakho - control of storage pests. Ithuluzi le-Amazon tracker lithatha konke ukuhlukunyezwa ngokuzenzakalela inqubo ye-keyword ukulandela ukuthutha. Udinga ukuchitha isikhathi esiningi kumagama angukhiye angokhiye wokusesha kanye nokuhlelwa kwedatha. Zonke lezi zenzo zizokwenziwa ngokuzenzekelayo esikhathini esifushane. Amazon tracker hlola rankings zakho izikhathi eziningi ngosuku, ukukunikeza ulwazi olufanele kakhulu futhi olusha. Isibonelo, uma wazi lapho izikhundla zakho khona khona ungasebenza ngaphansi kokuthuthukiswa kwazo. Noma uma usuvele unesikhundla esiphakeme kunazo zonke ku-Amazon SERP, ungasebenza ukusetha elinye igama lesesho, ukwandisa amathuba emikhiqizo yakho ebonisa emiphumeleni yokusesha.
Yingakho ngokusebenzisa i-Amazon rank tracker, uzohlala ube yisinyathelo esisodwa ngaphambi kwabancintisana nabo.
Yiziphi izinzuzo ezibaluleke kakhulu ze-Amazon rank tracker?
Uyazi izikhundla zamanje zamagama angukhiye ahlosiwe
Uma ungathanda ukuphumelela ku-Amazon, udinga ukwazi umkhiqizo wakho wamanje isikhundla. Le datha ingakusiza ukuba uthuthukise izinga lakho lekhasi le-Amazon bese udonsela amakhasimende angaphezu kwamakhasimende akho.
Ungakwazi ukulandelela izinguquko kwizikhundla
Noma yikuphi ukuguqulwa kuma-rankings kubonisa ukuthi kukhona okwenzekile ngomkhiqizo wakho. Kungaba ukunciphisa noma ukunyuka kumazinga wakho we-Amazon okudingeka usebenze ngaso leso sikhathi. I-Amazon rank tracker inikeza wena yonke le datha futhi ikuvumela ukuba uthathe isinyathelo esihlosiwe ukuze uthuthukise isimo sakho se-rankings ngokushesha.
Amagama amasha okucinga amathekisthi
Leli thuluzi likuvumela ukuba ungeze amagama wakho omusha wokusesha ohlelweni futhi uhlole amandla abo okubaqondisa ekuhlaleni kwakho kwe-Amazon. I-Amazon rank tracker izokubonisa ivolumu yosesho yegama elingukhiye ngalinye elihlosiwe, likunike ithuba lokunquma ukuthi kufanelekile ukukhomba noma cha. Umthamo wokusesha ophezulu wegama elingukhiye elihlosiwe lingabonisa kokubili - ukuncintisana okuphakeme nokuthandwa phakathi kwabasebenzisi. Njengomthetho, kuyinkimbinkimbi kakhulu ukukala okusezingeni eliphezulu yamagama angukhiye angukhiye, futhi kungase kube ngcono ukukhokha amagama akho okuncintisana angakunikeza ne-TOP ekhasini lemiphumela yokusesha.
Yenza ukuhlaziywa okuncintisana ngokuchofoza okukodwa
Leli thuluzi livumela abathengisi be-Amazon ukuba balandele abancintisana bangakhiye. Ungangeza elinye lamagama angukhiye abathintekayo bakho, ngokuliqhathanisa nalo elifanayo neyakho bese ubona ukuthi balinganisa kanjani. Uma ungazi kahle ukuthi yiziphi amagama eziyinhloko abancintisana nabo abazenzayo, ungabheka isihloko semikhiqizo yabo nencazelo.